Saameynta Qalliinka / Dooxidda Hooyada Uurka Leh! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Xirfada Saxaafada: Sawirro u Xullidda Internet-ka
Aanadii Negeeye – Qeybtii 26aad
Ibraahin Yuusuf Ahmed 'Hawd', December 19, 2019
Ilhaan Ciise Maxamed — November 18, 2018
Kawaran haddii lagugu qalo ilmaha, sidee ayay kuu saameyn kartaa maxaase lagaaga baahanyahay?
Marka hore aan ogaanno qalliinku/dooxiddu muxuuyahay?
Waa hab qalliin/jeexid/dooxid lagu sameeyo caloosha hooyada iyada uu ujeedkuna yahay in minka laga soosaaro ilmaha, kuwaas oo udhalan waayay si caadi ah, sababo badan owgood:
Qalliinka in lagu sameeyo hooyada mar waxa ey katimaadaa dhanka canugga, marna dhanka hooyada. Seddexdaan sababoot ayaa ugu badan in ilmaha lagu dooxo hooyada:
In canugga miisaankiisu badanyahay.
Inkafka hooyada uu aad uyaryahay.
In ilmuhu qalloocaan ama dabakeen uu yahay.
Maxay Kulatahay Faa’iidada Qalliinka Iyo Faa’iido Darradiisaba?
Haddii ey hooyada qabto cudur kamid ah cuduradaan kuwaas oo sababi kara ama qeyb kanoqon kara qalliin in lasameeyo sida: cudurka macaanka, ama infekshanka dhiigga raaca-Toxemia- waxaa qasab ah in lasameeyo qalliin caqabadda waxa ey ka imaan kartaa wadadii uu canugga soomari lahaa in ey furmiweyso dhammaan meeshuna ciriiri ey kunoqoto (miskaha hooyada oo yar awgeed).
Dhaqaatiirta ayaa go’aamiya qalliin marki dhalmada caadiga ah ey qatar ka imaato ama ey suuroobiweydo. cannuga ayaa laga soosaaraa minka iyadoo ladooxaayo caloosha hooyada iyo darbiga minka. Waxaa xaqiiq ah in hooyadu ubbaahantahay daryeel kabadan marki ey caadiga udhasho daryeelka lasiin lahaa.
Waxa aad dhaqtarka kala tashan kartaa haddii uu qalliinka lagama maarmaan uuyahya waxa aad weydiin kartaa in uu kuusharxo, waxaad kacodsan kartaa in uu kufahansiiyo sawirada kumbiyuutarka ee lagu saaray, waxaa muhiim ah in aad kuqanacsantahay qalliinka marki lasameynaayo. Kumbiyuutarka looyaqaan Altarasoon-Ultrasound- waa mid aad uhormarsan waxaa lagu ogaan karaa dhaq-dhaqaaqa canugga, garaaca wadnihiisa,meesha uu ujeedo, inta maalin ee udhiman.
Waa in sifudud loo badbaadiyaa hooyada iyo canugeedaba.
In xaalad qatar ah laga soosaaro ilmaha,tusaale in ilmuhu naqaska kuxirnaa si dhaqso ahna banaanka lookeeno.
in ey hooyadu dhaqso ilmo kale aysan qaadi Karin (illaa 2sano) dhaawaca owgiis.
In hooyadu looga cabsado qaadista culeysyada ama ey dhib kunoqoto.
In dhaawaca uu caabuq yeesho, dibna uu ufurfurmo.
Ujeedooyinka Qalliinka Loosameeyo?
Ujeedooyinka ugu badan ee qalliinka loosameeyo ayaa ah
Waxaad arkeysaa inta badan dadkeenna in ey aad uga walwalaan ugana cabsadaan qalliinka ama dooxidda, mararka qaar qoyska ey kasoojeeddo hooyada marki loo sheego waxaa kadhax-dhasha buuq iyo dagaal iyada oo aan la’isku waafaqeynin qalliinkaas, dadka qaarkood ayaa go’aan sada in qalliin aanan lagu sameynayn gabadhooda oo ey sideeda ku heysanayaan iyada oo laga yaabo in ey halis kujirto gabadha, wax cilmi ah umalahan in qalliinku xunyahay ama wanaagsanyahay. Sababta qalliinka loosameynaayo ayaa ah “bad-baadin” in ey nafta canugga bad-baado ubbaahantahay ama in lakala badbaadinaayo hooyada iyo canuggaba.
Qof waliba oo laqalo miyaa dhinta mise halis gala? Wey jirtaa mar uu qalliinku aad u halis badnaa dalkeenna hooyo, laakiin hadda waxaa ladhihi karaa waxa uu marayaa meel wanaagsan sababtoo ah qofki laqalo waxa uu kusoo kabtaa todobaadyo gudahod manalahan intabadan wax caqabado sidaa uwaaweyn ookadhasha qalliinka. Macnaheygu ma’ahan in aan qalliinka taageersanahay laakiin waa in aan qof miskiin ah oo lagu badbaadinkaro qalliin uusan uwaxyeeloobin aqoon la’aan awgeed. Sidaa darteed waxa aan kutalin lahaa qofwaliba oo annaga naga mid ah in uu siqoto dheer ubarto qalliinka faa’iidadiisa iyo faa’iido daradiisaba.
Maxaa Saameyn Kuleh in Qalliinka illaa Xadkaas laga cabsado?
Waxaa jiro qeybo badan oo saameyn kuleh qalliinka in ey dadku kawalwalaan sida:
Dhaqaatiirta qaar waxa ey qeyb weyn kayihiin in ey dadku siqaldan ufahmaan qalliinka, sababtoo ah waxa aad arkeysaa dad badan oo qalliin dhaqtar uu sooyiri in midkale marki lageeyo uu kuyiraahdo qalliin matihid. Waxaad kale oo aad arkeysaa hooyooyinka qaar oo loodiyaarinaayo qalliin in si caadi ah ey udhalaan caqabad la’aan. Bulshada waxa ey niyadda kuheysaa in lacag darted looleeyahay qalliin oo eysan ahayn cilmi ahaan.
Fahansanaan la’aan:intabadan caqoon ahaan dadku mafahansana qalliinka/dooxidda iyo waxa ey tahay ama faa’iidada iyo faa’iidada darada ey leedahay, taasi waxa ey keenikartaa iyada oo xaaladdu culustahay in qof uu go’aan iska qaato diidana qalliinka, halkaasna ey katimaado caqabad hor-leh.
Latashiga qof aanan aqoon ulahayn waxa lagala tashanaayo: bulshadeena waa bulsho hadal, intabadan waxa ey kasheekeystaan xaaladahooda caafimaad, marki uu qofka xanuunsado meeshi uu dhaqtar latashi u aadi lahaa waxaa ufudud in uu wareysi u aado qof looga sheegay in xanuunkaan ookale kudhacay misane daawooyin lasiiyay uuku bogsooday, taasi waxa ey kutusineysaa in ey yihiin dad hadalka kala qaata. Sidaas ookale haddii qalliinka laga hadlo waxaa dhacda mararka qaar in uu qof dhaho anigaaba qalliin la’idhahay caadi ayaana udhalay ee gabadha yaan laqalin.!!!
Quraafaad la’aaminsanyahay: in qofki laqalo uusan waxba qabsan Karin, in uu caloosha kadillaacayo iyo in uu noqonaayo qof kadaciifsan dadka kale. Dhammaan waa wax laga sookabankao.
Tags: Saameynta Qalliinka/Dooxidda Hooyada Uurka Leh!
Next post AMISOM: Adeegayaasha Minjo-xaabinta Israaca Soomaliyeed!!
Previous post Hurgumada Sokeeye Intay Jirto, Hadimada Shisheeyana Way Jirin?